Midwest Cimilada & Tamarta, Bulsho firfircoon & Bulsho
Sida sarkaalka barnaamijka ee leh Bulshooyinka Fir -fircoon & Sinnaanta iyo Barnaamijyada Cimilada & Tamarta Midwest, Dominic McQuerry wuxuu kormeeraa oo horumariyaa xirmooyinka deeqda hal -abuurka ee isgoyska McKnight cimilada iyo yoolalka sinnaanta iyadoo xoogga la saarayo xoojinta ka -qaybgalka dimuqraadiyadda iyo ka -qaybgalka bulshada. McQuerry waa siyaasad iyo xirfad -yaqaan ka -qaybgalka bulshada oo leh hammi ah in la taageero nolosha dadka iyo hab -nololeedkooda, hagidda iyo taageeridda isbahaysiga xoogga leh ee Minnesota xagga guriyeynta, daryeelka caafimaadka, daryeelka carruurta, iyo in ka badan. McQuerry wuxuu horumarin doonaa oo hirgelin doonaa istaraatijiyad ku salaysan Minnesota si loo xoojiyo waxtarka dhaqdhaqaaqa iyo awoodda kuwa ay saameeyeen caddaalad darrada.
McQuerry wuxuu McKnight uga yimid Amherst H. Wilder Foundation, halkaas oo uu ku hagayay siyaasadda dadweynaha iyo shaqada xiriirka bulshada, taasoo horseeday isbahaysiyo guulaystay oo ka dhacay Capitol -ka gobolka. Machadka Wilder, McQuerry wuxuu ka shaqeeyay sidii loo burburin lahaa siloosyada siyaasad dejinta ee dadka iyo bulshooyinka kala soocaya geeddi -socodka dhiirrigelinta ficil wadareed iyo keenista codad cusub Capitol -ka gobolka. Iyada oo ay weheliyaan la -hawlgalayaal badan, McQuerry wuxuu u dagaallamay caafimaadka, adeegyada aadanaha, iyo isbeddelada siyaasadda guryaha, isagoo u xaqiijiyey guulo waaweyn Minnesota. Waxaa xusid mudan, McQuerry wuxuu la kaashaday waalidiinta Saint Paul Promise Neighborhood and Neighborhoods for All isbahaysiga si uu u meel mariyo sharci lagu dhisayo Shaqada Guriga oo Ka Bilaabanta Guriga, barnaamijka kaalmada kirada ee hoylaaweyaasha iyo qoysaska aadka u guurguura ee leh carruurta da'da dugsiga. Waxa kale oo uu maamulay Barnaamijka Sinnaanta Bulshada, halkaas oo uu diiradda saaray sidii loo xoojin lahaa ka -qaybgalka bulshooyinka BIPOC ee hannaanka sharci -dejinta.
Laga soo bilaabo 2019 illaa 2020, McQuerry wuxuu lataliye siyaasadeed u ahaa Guddoomiyaha Tim Walz iyo Guddoomiyaha Lt. Peggy Flanagan oo ku saabsan maalgashiga raasamaalka, guriyeynta, hoy la'aanta, arrimaha ruug -caddaaga, iyo horumarinta ballaarinta. Doorkan, wuxuu gacan ka geystay hagidda istaraatiijiyadda iyo sharciyada xafiiska guddoomiyaha, wuxuu kula taliyay guddoomiyayaasha wakaaladda gobolka iyo shaqaalaha horumarinta siyaasadda iyo hindisayaasha miisaaniyadda, wuxuu la xaajooday sharci -dajiyayaasha, wuxuuna si dhow ula shaqeeyay daneeyayaasha. Intii uu xilka hayey, Minnesota waxay meel marisay biilkii ugu weynaa ee isku -xidhka taariikhda gobolka, oo ay ku jirto $30 milyan oo si gaar ah loogu talagalay mashaariicda ururrada samafalka oo ay hoggaamiyaan oo u adeegaan reer BIPOC reer Minnesota.
McQuerry wuxuu baraa koorso ku saabsan u -qareemeynta aan macaash doonka ahayn, abaabulka, iyo u ololaynta sidii xubin ka mid ah macalimiinta beesha ee Jaamacadda Metropolitan State ee Masters of Advocacy iyo barnaamijka Hoggaaminta Siyaasadda. Wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee siyaasadda guud iyo shahaadada bachelorka ee cilmiga siyaasadda Jaamacadda Minnesota, wuxuuna ka helay Abaalmarinta Hoggaanka Ardayga ee Dugsiga Humphrey sanadkii 2017 waxqabadkiisii ku biiriyay danta guud ee hoggaanka iyo adeegga.